Akpụkpọ anụ MICROFIBER maka oche ụgbọ ala na-ekpuchi ndị na-emepụta & ndị na-ebubata ihe - China MICROFIBER Akpụkpọ anụ maka ụgbọ ala oche mkpuchi ụlọ ọrụ
Eco nappa ọka ọka solv ...
Eco vegan sịntetik akpụkpọ anụ...
Sịntetik pvc akpụkpọ anụ...
Suede microfiber emegharịrị w...
Akpụkpọ anụ microfiber enyo enyo
Mgbochi abrasion ṅomie ezigbo akpụkpọ anụ arịa ụlọ na-ekpuchi ihe microfiber
1.This nwa ehi Texture nke Microfiber akpụkpọ anụ na-ọma ere n'ụwa nile.Ọ na-eṅomi akpụkpọ anụ ehi.Ihe microfiber na-anabatawanye nke ndị mmadụ n'ihi uru ya dị ka n'okpuru ebe a na nkwalite ndị mmadụ maara banyere nchebe gburugburu ebe obibi na nchebe anụmanụ!
2. Ọ bụ nke nta nke nta ka ọ bụrụ ezigbo akpụkpọ anụ na ihe PU ka ọ bụrụ isi ihe maka akpụkpọ ụkwụ , akpa aka, ngwá ụlọ, akpa, uwe, oche ụgbọ ala, ngwaahịa electronic, igbe ọla, basketball, football, wdg.
3. The Microfiber akpụkpọ anụ bụ iku ume, na-eyi abrasion na ọkọ ihe àmà!N'iji ya tụnyere ezigbo akpụkpọ anụ, kemịkalụ na ọdịdị anụ ahụ nke PU Microfiber akpụkpọ anụ otu ma ọ bụ ọbụna mma karịa ezigbo akpụkpọ anụ.Ọ nwekwara uru igbutu dị elu.Ọnụ ego ahụ dị obere.Ọ nwere ike belata ọnụ ahịa akpụkpọ ụkwụ ma mee ka asọmpi na ahịa dịkwuo elu.
Ejiji Antique ihe microfiber ụda abụọ maka arịa ụlọ ejiji ochie
Ngwaahịa anyị na-enwe mmetụta dị mma dị ka ezigbo akpụkpọ anụ mana ọ na-abịa na-enweghị nke ọ bụla n'ime ihe ndọghachi azụ ya.Ọ dị nro, dị mfe ihicha na ilekọta ya, yana nke na-adịgide adịgide.
Anyị nwere ihe karịrị 200 agba, textures, na ọka nke ị nwere ike họrọ.N'agbanyeghị ihe ị chọrọ, ị na-ekwe nkwa na ị ga-ahụ ya na ụlọ ọrụ anyị.
Enwere ike iji akpụkpọ anụ artificial anyị na-ere ọ bụghị naanị maka oche, kamakwa maka mkpuchi mkpuchi ụgbọ ala, mkpuchi ụgbọ ala / isi okwu, dashboards, na akụkụ ndị ọzọ nke ime.